I-Lactoferrin (LF), eyaziwa nangokuthi i-lactotransferrin (LTF), i-glycoprotein emelwe kabanzi kuketshezi oluyimfihlo oluhlukahlukene okubandakanya ……
Igama leKhemikhali i-lactotransferrin (LTF)
I-Lactoferrin iyingxenye yesistimu yomzimba futhi inomsebenzi wokulwa namagciwane. Ngaphezu kwemisebenzi esemqoka yokuhlanganisa nokuhambisa i-ayoni, iLactoferrin nayo inemisebenzi nezimpawu zensimbi elwa namagciwane, i-antivirus, ukumelana nama-parasites, i-catalysis, ukuvimbela umdlavuza nokulwa nomdlavuza, ukungezwani komzimba nokuvikelwa kwemisebe. Abanye abantu bathatha izithasiselo ze-lactoferrin ukuthola izinzuzo zokulwa nokuvuvukala.
I-Lactoferrin powder iphephile ngamanani asetshenziswe ekudleni. Ukudla amanani aphakeme e-lactoferrin obisini lwenkomo kungahle futhi kuphephe kuze kube unyaka. I-lactoferrin yabantu eyenziwe ngelayisi elicutshungulwe ngokukhethekile ibonakala iphephile kuze kube yizinsuku eziyi-14. I-Lactoferrin ingadala isifo sohudo. Ngezilinganiso eziphakeme kakhulu, ukuqubuka kwesikhumba, ukulahlekelwa isifiso sokudla, ukukhathala, ukugodola nokuqunjelwa kubikiwe.
Lauterbach R et al., Lactoferrin - i-glycoprotein yamandla amakhulu okwelapha, i-Dev Period Med. 2016 Ephreli-Jun; 20 (2): 118-25.